» कोरोना महामारी चिनमा भन्दा इटालीमा किन बढी देखियो ?
कोरोना महामारी चिनमा भन्दा इटालीमा किन बढी देखियो ?
१० चैत्र २०७६, सोमबार १९:३३
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण इटाली सबैभन्दा खराब दिनहरु बिताइरहेको छ ।
भाइरसका कारण ५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको इटालीमा नयाँ संक्रमित साढे ५ हजारभन्दा बढी भेटिएका छन् ।
कोरोना संक्रमणको दर उच्च हुनु र त्यसको मृत्युदर पनि उच्च हुनुका विभिन्न कारणहरु मध्ये इटालीको जनसंख्यामा प्रौढहरु धेरै हुनु हो ।
समग्र जनसंख्यामा गत वर्ष औसत आयुका ४५.४ प्रतिशत थिए जुन युरोपका सबै देशभन्दा बढी हो। यो चीनभन्दा ७ वर्ष बढी र दक्षिण कोरियाभन्दा केही बढी हो ।
गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुने हरुमध्ये औसत उमेर समूहका ७८.५ प्रतिशत छन्। तीमध्ये ९९ प्रतिशत त्यसअघि नै कुन न कुनै रोगबाट ग्रसित थिए ।
अमेरिकाजस्ता देशलाई दैनिक एक लाखको परीक्षण गर्न सजिलो हुने हार्भर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माइकल मिना बताउँछन्।स्रोतः डेली मर्करी